Hotel room Room SafeStes Touch Screen Digital Password EM-2045-TY
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > စီးပွားရေးလုံခြုံမှု > ဟိုတယ် Safe
Hotel Room အတွက် Hot Shot Hotel Hotel Safe Box Laptop Size Electronic Lock
* ပစ္စည်း: သံမဏိ
* အပြင်ဘက်ရှုထောင့်များ: H200 * W450 * D370MM
* အထူ - တံခါး -5မီလီမီတာ, ခန္ဓာကိုယ် - 2mm
* n.w. (ကီလိုဂရမ်): 11KG
* Lock: ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ပါသောအီလက်ထရောနစ်ဒီဂျစ်တယ်သော့ခတ်
* စွမ်းရည် - 14 "-17" လက်တော့ပ်များ
* အရောင်: အနက်ရောင် / အဖြူရောင်
* LED မျက်နှာပြင်
* mounting တွင်း: နောက်ကျော၌2အောက်ခြေ၌ 4
* အီလက်ထရောနစ် override မှအရေးပေါ်အခြေအနေများ& စက်မှုသော့
* သက်ဆိုင်သောမြင်ကွင်း - ဟိုတယ်ခန်း, ရုံး, ရုံးခန်း / အိပ်ခန်း / လေ့လာမှုခန်း / living ည့်ခန်း
2004 ခုနှစ်မှစ. Foshan Woshan Woshan Woshan City တွင် Foshan Weierxin Safe Co. , Ltd သည်0န်ထမ်း 100 ကျော်ရှိပြီး0န်ထမ်း 100 ကျော်ရှိပြီး0န်ထမ်း 100 ကျော်ရှိသည်။ ၎င်းသည်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ထုတ်လုပ်မှု, အရောင်းနှင့်0န်ဆောင်မှုတို့ဖြင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Weierxin Safe သည်မီးလောင်ရာများ, ရုံးလုံခြုံမှု, ဟိုတယ်များ, သေနတ်များ, သေနတ်များ, စီ။ အီး။ နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုကိုနှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုပမာဏ 500,000 ကျော်ဖြင့်ထုတ်ကုန်များကိုအိမ်, ရုံး, ကျောင်း, ဆေးရုံ, ဟိုတယ်စသည့်နယ်ပယ်များတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။ အကောင်းဆုံးသောအတန်းအစားတန်ဖိုး, သုံးစွဲမှုလွယ်ကူခြင်း, ကြာရှည်ခံခြင်း, ယုံကြည်စိတ်ချရမှု, Weierxin Safe တွင်ပြည်တွင်းစျေးကွက်တွင်ရောင်းဝယ်သူ 1000 ကျော်နှင့်သစ္စာစောင့်သိသောဖောက်သည်5သန်းကျော်ရှိသည်။ ဤအတောအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုလည်းကမ္ဘာအနှံ့တင်ပို့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမှတ်တံဆိပ်အများအပြား၏ oem ပေးသွင်းသူဖြစ်သည်။ 2004 ခုနှစ်မှစ. ထုတ်ကုန်များကိုအစဉ်အမြဲအကောင်းမြင်ပြီးတိုးတက်လာပြီးပိုမိုများပြားသောအသုံးပြုသူများကိုလိုက်နာရန်နေတုန်းပဲ။ ကောင်းမွန်သော OEM နှင့်အတူထုတ်လုပ်မှုအဖွဲ့ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်& OMD အတွေ့အကြုံ ..oem / odm အမှာစာများကိုကြိုဆိုသည်။ ကျနော်တို့ r ကိုအတွက်ကြီးစွာသောအားသာချက်ရှိသည်&D, အထူးသဖြင့်မီးလောင်ခြင်းဆိုင်ရာ safe တွင်ဖောက်သည်များ၏လုံခြုံမှုကိုစုဝေးစေပါ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံများစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၏ထုတ်ကုန်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ဒီဇိုင်းနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်များကြောင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောမဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်အဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။
1. ကျွန်ုပ်တို့သည် Rosh, FCC ကိုအောင်မြင်ခဲ့သည်။
2.Eem ပံ့ပိုးမှု& ODM ဝန်ဆောင်မှု။
ဖြေ။ ။ သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီကွဲပြားသောအရွယ်အစား, ထုပ်ပိုးခြင်း, အရောင်နှင့်လိုဂိုများကိုကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
A: များသောအားဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုပြီးအောင်လုပ်ရန် 25-45 ရက်ကြာလိမ့်မည်, သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံမှာယူမှုအရေအတွက်နှင့် SAFE အရွယ်အစားပေါ်မူတည်သည်။
A: 1. ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များအားအကျိုးရှိစေရန်အတွက်အရည်အသွေးကောင်းပြီးယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသောစျေးနှုန်းကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ 2. ဖောက်သည်များအားကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်းအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်ဆံသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်နေရာမှမည်သည့်နေရာတွင်ပင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အတူမိတ်ဆွေဖွဲ့ရန်နှင့်သူတို့နှင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့ကြသည်။
* ပစ္စည်း: သံမဏိ။* အပြင်ဘက်ရှုထောင့်များ: H200 * W420 * D370mm ။* အထူ - တံခါး - 4.5 မီလီမီတာ, ခန္ဓာကိုယ် - 1.5 မီလီမီတာ။* Lock: အီလက်ထရောနစ်ဒီဂျစ်တယ်သော့ခတ်။* စွမ်းရည် - 14 "-17" လက်တော့ပ်များ။* အရောင်: အနက်ရောင် / အဖြူရောင်။* LED မျက်နှာပြင်။* mounting တွင်း: နောက်ကျော၌2နှင့်အောက်ခြေ၌4။* လျှပ်စစ်အမှုန့်ကုတ်အင်္ကျီဆေးသုတ်ခြင်း။* အီလက်ထရောနစ် override မှအရေးပေါ်အခြေအနေ& စက်မှု key* သက်ဆိုင်သောမြင်ကွင်း - ဟိုတယ်ခန်း, ရုံး, ရုံး, အိပ်ခန်း / လေ့လာမှုခန်း / L.Diving room ။
* ပစ္စည်း: သံမဏိ* ပြင်ပမှရှုထောင့်များ: H150 * w410 * d350mm* အထူ - တံခါး - 4mm, ခန္ဓာကိုယ် - 1.5mm* n.w. (ကီလိုဂရမ်): 10kg* Lock: အီလက်ထရောနစ်ဒီဂျစ်တယ်သော့ခတ်* စွမ်းရည် - 14 "-17" လက်တော့ပ်များ* အရောင်: အနက်ရောင် / အဖြူရောင်* LED မျက်နှာပြင်* mounting တွင်း: အောက်ခြေ၌ 4* လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးအမှုန့်ကုတ်အင်္ကျီဆေးသုတ်ခြင်း။